Olee otú Naghachi ehichapụ Photos & Videos si Nokia 5800
> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ Photos & Videos si Nokia 5800
Nokia 5800 kaadị ebe nchekwa emerụ: mkpa naghachi photos!
My Nokia 5800 kaadị ebe nchekwa emerụ! All foto m, videos na music na-arahụ. Ụfọdụ foto bụ oké m mkpa. M na-enweghị ndabere. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ naghachi ha? Daalụ n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ na kaadị ebe nchekwa gị ike ka a ahụrụ site na kọmputa gị, ị nwere ike naghachi faịlụ niile site na ya. Ihe kasị mkpa ị chọrọ ntị ka bụ iji chebe gị kaadị si anụ ahụ emebi. Ozugbo ọ mebiri emebi n'ụzọ anụ ahụ, ọ dịghị onye nwere ike inyere naghachi foto gị Nokia 5800.
Olee otú naghachi foto & vidiyo si na Nokia 5800 na kaadị ebe nchekwa
Nke mbụ niile, chọta a pụrụ ịdabere na Nokia 5800 mgbake ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na ị ka na-achọ onye, ​​ebe a bụ m nkwanye: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac, nke nwere ike inyere naghachi niile faịlụ site na gị Nokia 5800, ọbụna na kaadị ebe nchekwa na-emerụ. Ihe bụ ihe ọzọ, nke a mgbake ngwá ọrụ na-enyere gị iji weghachite niile ehichapụ, formatted ma ọ bụ keerughi photos, videos na songs dị mfe 3 nzọụkwụ.
Gbalịa free ikpe mbipute a Nokia 5800 mgbake software ugbu a.
Step1. Jikọọ gị Nokia 5800 na kọmputa
Tupu ị na-eme ihe ọ bụla ọzọ, jikọọ gị Nokia 5800 na kọmputa na a dijitalụ USB, ma ọ bụ na jikọọ emerụ kaadị ebe nchekwa na a kaadị agụ. Ị kwesịrị ị na comfirm na ọ ga-ọma achọpụtara na-egosi dị ka a mbanye leta na "My Computer". Mgbe ahụ na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị na "Malite" Nokia 5800 faịlụ mgbake.
Step2. Iṅomi photos, videos na music na gị Nokia 5800
Ebe a, họrọ gị Nokia 5800 (na-emekarị na-egosiputa dị ka a mbanye akwụkwọ ozi m), na pịa "iṅomi" chọpụta faịlụ niile na ekwentị gị.
Step3. Naghachi photos, videos & music si Nokia 5800
Mgbe Doppler, niile recoverable faịlụ na-egosipụta na edemede. Ịnwere ike ihuchalu ma ego faịlụ si àgwà, na-agbake ndị ị chọrọ na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị Nokia 5800 ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Olee otú Naghachi Data si emerụ SD Kaadị
Olee otú Naghachi ehichapụ Photo & Video si Nokia Lumia
Olee otú Wepụ iPhone oku History
Olee otú Igosi Kingston SSD Data Recovery
Olee otú Igosi formatted Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
Ihe kacha ụzọ Nyefee Windows na ekwentị iOS 9
Olee otú resize nkebi na Windows 10/8/7?
iPhoto Recovery: Olee naghachi ehichapụ Photos si iPhoto Library
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site Nokia N97
Olee otú Naghachi partitions na Windows / Mac
Olee otú naghachi faịlụ site Pen Drive